Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi iley oo ilmada hoorinaya ka dib markii lagu gamgameeyey Herer
Cabdi iley oo ilmada hoorinaya ka dib markii lagu gamgameeyey Herer
Warar aad u muhiim ah oo naga soo gaadhay Jigjiga ayaa muujinayaa niyad jabka haysta gacan ku-dhiigle Cabdi ilay ka dib markii looga yeedhay maalintii Arbacada ahayd magaalada Herer ee loo yaqaano [kifla-doorka ]. Nin ka mid ah qaar uu ku xanqarsaday oo nasoo gaadhsiiyay ayaa noo sheegay in halkaas ay ku gamgameeyeen siduu yidhi saraakiil sar sare oo katirsan ciidanka Itobiya, wuxuuna ku saabsanaa buu yidhi xaalada dagaal ee jiida hore ee Ogadenia.
Ninkan uu ku xanqarsaday Cabdi iley ayaa sheegay inay ku yidhaahdeen waxaad tahay beenaale, waxaana lagu amray inuu kala saaro; 1 – Xogta dhabtaha ee ay dawladu ku shaqayso iyo warbixinada la siinhayo saraakiisha dawliga aha iyo kuwaan dowliga ahayn. 2 – Beenta iyo borobogaandada loo sheegahayo shacabka. Waxaana isla markiiba amar lagu siiyay inuunan been danbe u sheegi karin saraakiisha dawladda, warbixinadiisana uunan been ka dhigi karin lagana aqbali doonin hadii uu isku dayo arinkaas…
Wuxuu noo sheegay ninka na soo gaadhsiiyay fariintan in waxa ugu wayn ee ku kalifay in sidaas loola hadlo ama loola dhaqmo ee saraakiisha Itibiya ay u haystaan ina Iley ayaa ahayd su’aal ay isweydiiyeen maamulka Itobiya .. taasoo ahayd sidan; Jabhada ONLF hubka iyo rasasta ay isticmaasho waxay ka heshaa kililka, mana jirto wax meel kale uga soo daga. Arinkaa oo yaab ku noqotay danbiilaha ayaa waxay saraakiishii qiimaynhaysay u sheegeen in Itobiya ay budget-keeda ugu faraha badan ku lumiso hub iyo saanad ciidan aynna gayso un Ogaden si toos ahana ay ula wareegaan ONLF isla markaana aad idinka gacanta ka galisaan. Waxaa la weydiiyay maxaaad uga fikiri la’dihiin arintan hadii aad tihiin maamulka kilika ood walaac uga muujin la’dihiin?
waxaa lagu yidhi; waxaad ogtahay Ileeyaw in ONLF ay lawareegtay dhamaanba waxii sanad ciidan ee taalay magaalada Galaalshe, sidoo kalana waxaad ogtahay in bishan bisheedii ay ahayd markii ay sidan oo kale ula wareegeen dhamaanba wixii saanad ciidan ee taalay tuulada Mal-qaqa, oo isla Galaalshe uun ka tirsan. Waxaa kaloo lagu yidhi waxay sirdoonka Itobiya xaqiijiyeen inaynan wax hub ahi meel kale uga soo dagin JWXO ee ay kaliya kilika uun ka helaan, ee maxad arinkan xal uga gaadhi waydeen kililaw.
Su’aasah labaad ee ina Iley ka wareerisay waxay ahayd sida laga soo wariyay; JWXO waa wiilal Soomaali aha, Liyuu-geenuna (Hawaarinta) waa wiilal Soomaali ahe maxay isaga celin la’yihiin kuweenu kuwa ONLF-ta}?
Wuxuu yidhi ninka warkan ka soo tabiyay; arintaa waa arin aad ay walaac uga muujiyeen maamulka Itobiya … nac-nac iyo beena way soo gabagabowday ee tolow maxay ku danbayn? Allaa garan .. Arinkan oo ay Itobiya si wayn u rabto inay xal uga gaadho ayay waxay u soo bandhigtay madax-xafiiseedyadii heer kilil ee dhawaanta loo qaaday dhankaas iyo Addi-ababa kuwaas oo ay ihaadhigta siinayeen siminaar laba bilood ilaa sedex bilood ah, si loo qabadsiiyo wasiirada heer kilil waxa loo yaqaano -akaahiidhka yihaadhigta – ama hadafka iyo nidaamka siyaasadeed ee TPLF-ta.
Hadaba wasiiradan ayaa loo sooo bandhigay sidoo kale arintan waxayna uga jawaabeen sida naloo sheegay sidan; Xaalada koowaad ina lley waa kaligii taliye isaga uun waxa uu doono go’aansada isaga uunbaana wax laga waydiin. Tan kale waxa kalifay bay ku yidhaahdeen in Hawaarintu iska celinwaydo ciidanka JWXO waxaa weeye maleeshiyada Hawaarinta oo haba yaraatee aan haynin wax mooraal aha taasoo ay ku macneeyeen [waxa meeshu u xidh-xidhantahay qoys kaliya waana qoyska ina lley uu ka dhashay. Sidas darteed bay yidhaahdeen; cidii aan iyaga ahayn ee ku jirtaayiba wax mooraal aha ma haysee way iska dhax socdaan uun taas ayaanu anagu ku wadnaa inay kaliftay iska cilin la’aantaas hadaanu nanahay wasiiradii kilika ..
Wuxuu intaa ku daray in ka dib markii uu ina lley ka soo laabtay gam-gamihii kifla doorka Herer waxa uu shir deg-deg aha isugu yeeshay gudigiisa fulinta intii joogtay Jijiga halkaas oo uu kula yeeshay maalintii daraad ahayd shir la malaynhayo inuu kala hadlahayo arimihii isaga uun lagu haystay..
ina ilaha ogaadeen shaqasi kasta oo dadkiisa wax yeelya asna saas un baa u dambayn ila dhawra meesha uu ku dambeeyo ina ilay beentii way socon waysay xaqii shacabkaa dilaacay muda yar kadib beentii dhiigyacab y
waxaaba dhici karta maalin dhaw Tigregu inay dilaan ina iley, oo ay iska khaarajiyaan, sida uu shacabka reer Ogaadeeniya u dhibo, ayuu iyagana ku noqday jaah ma garato ay la dhaqmi kari la`yihiin.
INA ILEY WAY U DHAMAATAY, ADUUNKA ALLAAH HA KU CADAABO AAKHIRA KA HOR.